Maxay tahay in dadka madow / Afrikaanku ay ka naxsadaan khaniisnimada ka dhex jirta kaniisada Katooliga? Ka dib markii Pope Francesco uu ku taliyay, "Urbi et Orbi," khaniisnimada, Negroes wuxuu yiri way naxeen, laakiin kuwa kale ayaa Katooligga ka badan kan Pope laftiisa ilaa heer ay tilmaameen in " Pope-ka ma aha Ilaah ”
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 29, 2020 02: 22 No Comments
Pourtant selon la catéchèse qu’ils ont apprise avant les sacrements qu’ils ont reçus « Le pape ne peut ni se tromper ni leur tromper ». Chers Nègres, qui vous a appris et parlé...	Akhri wax dheeraad ah
Waa maxay ? Ma noqon kartaa khaniisnimada Kitaabka Quduuska ah ?? Khaniisiintu waxay rabaan inay la wareegaan awood siyaasadeed - dhul bay heleen, wayna sii muuqanayaan
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 29, 2020 00: 00 No Comments
Ils ont de plus de droits au nom des « Droits humains ou des personnes » En Europe et aux États-Unis. Ils ont obtenu le droit de se marier entre eux et de fonder un couple. Ils veulent adopt...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 28, 2020 00: 50 No Comments
Dhammaan fikradahaas qaldan waxaa iska leh Ilaaha reer binu Israa'iil, oo loogu yeedho Aabbaha Cirka oo ku jira daruuraha. Madow / Afrikaanku way baryaan maalin kasta, laakiin waxba isma beddelaan, waxna ma socdaan ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 28, 2020 00: 45 No Comments
Had iyo jeer xusuusnow tan waxaadna noqon doontaa qalinka ugu fiican ee suurtogalka ah. 1. Waxaad samayn kartaa waxyaalo waaweyn, laakiin waa haddii aad u oggolaato gacantaada inay ku hanuuniyo; 2. Waqti ka waqti, ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 28, 2020 00: 40 No Comments
Markaad ogaato in si aad u soo saarto waxaad u baahan tahay ogolaansho qof aan waxba soo saarin. Markaad ogaato in lacagta loogu talagalay kuwa sameeya ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 28, 2020 00: 30 No Comments
Waa kuwan oo fiiri waxa loogu yeero sayidyadaada, dadka ku siinaya casharro anshax, kuwaas oo kuu sheegaya waxa la sameeyo, sida loo noolaado, sida loo dhaqmo (…). Kadibna, kuwani waa g ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 28, 2020 00: 20 No Comments
“Dooddu way furan tahay! Biya ayaa ku waalatay rooga cas; xitaa inaad kaqeyb gasho aaska, waa inaad abaabushaa ilaha si aad ugu iibsato rooga casaanka ah ee loo soo dhigi doono. VS ...	Akhri wax dheeraad ah
Nov29 08: 54